आजदेखि मौसम सुधार हुने - प्रशासन प्रशासन
आजदेखि मौसम सुधार हुने
प्रकाशित मिति : 27 February, 2020 10:28 am
काठमाडौँ । पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभावले पछिल्लो केही दिनयतादेखि प्रभावित मौसम सुधार हुँदै जाने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
उक्त न्यून चापीय प्रणाली बुधबार बेलुकादेखि बाहिरिएकाले मौसममा सुधार भएको मौसमविद् मञ्जु बासीले बताइन् । ‘आज र भोलि देशभर वर्षा हुने सम्भावना छैन’, उनले भनिन् । बिहान उपत्यकामा बादल देखिए पनि दिउँसो खुला भई घाम लाग्ने बताइएको छ । राति देशका मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने औँल्याइएको छ ।
शुक्रबार देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने अपराह्नपछि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
शनिबारदेखि फेरि अर्को नयाँ मौसमी प्रणाली विकसित हुने भएकाले देशको पश्चिमी भूभागलगायत मध्य तथा पूर्वी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पश्चिमी पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्को भनाइ छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आठ दशमलव आठ डिग्री र अधिकतम तापक्रम १४ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस छ । त्यस्तै आज जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम सबैभन्दा कम एक दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ ।
Tags : मौसम
1 April, 2020 2:11 pm
राहत रकम वितरणका लागि विशेष निर्देशिका जारी
जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ ले लकडाउनका कारण आर्थिक सङ्कटमा
27 March, 2020 7:08 pm
अलपत्र नेपाली कामदारलाई घरघरमा पुर्‍याउन गृहको निर्देशन
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ‘लकडाउन’पछि अलपत्र परेका विभिन्न निर्माण सम्बन्धी
27 March, 2020 6:27 pm
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, नियन्त्रणका क्रममा मृत्यु भए १० लाख !
काठमाडौँ । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिन
22 March, 2020 7:47 pm
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी, केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहेको छ